🥇 ▷ 10ka macaamiisha ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan Windows 10 ✅
10ka macaamiisha ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan Windows 10
QBittorrent shaki la’aan waa macmiilkayaga qulqulka badan ee Windows 10. Maadaama aan nahay macmiil isha furan oo furan, waxaan u aragnay inuu yahay mid lagu kalsoonaan karo, dhakhso leh, oo dhammaystiran oo aan lahayn xayeysiis, fayras, ama barnaamij kasta oo aan loo baahnayn oo lagu soo daro rakibaadda. Barnaamijka ayaa wali si joogto ah loo cusbooneysiiyaa wax ka badan toban sano kadib markii la siidaayay bilowgiisii, iyo cusboonaysiinta ugu dambeysay, Qaabka muuqaalka ee software-ka ayaa la cusbooneysiiyay si uu uga dhigo mid ka sii nadiifsan sidii hore. Aynu eegno waxa ka dhigaya mid ka mid ah macaamiisheena biyaha dabacsan ee Windows 10)
Rakibaadda qBittorrent waa mid dhakhso leh oo fudud, iyadoo aan lagu darin wax kasta oo weheliya dalabka, plugins ama wax kasta oo kale oo loo tixgelin karo inay cadow ku yihiin isticmaalaha. Inta lagu gudajiro rakibida, waxaad fursad u leedahay inaad go’aamiso inaad rabto iyo inkale qBittorrent inaad si toos ah u sameyso qawaaniinta Windows Firewall. Sababtoo ah codsiyada qulqulaya ayaa waqti dheer lagu yaqaanay inay leeyihiin arrimo ku saabsan guluubka Windows-ka iyo MacOS, waxaan si weyn ugu mahadcelineynaa fududeynta kordhay, badbaadinta isticmaaleyaasha waqtiga iyo samirka inta lagu gudajiro. Barnaamijku waa yara yar yahay, uma baahna wax ka badan dhowr ilbidhiqsi oo waqti ah si loogu rakibo kombuyutarkaaga, marka la dhammaystirona, qBittorrent si toos ah ayaa looga furayaa mashiinkaaga. Waxaan helnay dalabka si aan u isticmaalno ilaha ugu yar inta aan ku shaqeyneyno Muuqaalka Mashiinka baarida.
Shaashadda guud ee qBittorrent waa, si aan shaki ku jirin, waa cadaalad aasaas u ah baaxadda iyo qaabeynta, laakiin taa micnaheedu maahan inaysan kuxiran astaamo. Dhinaca midig ee showga, waxaad kaheleysaa xaaladdiisa, oo tuseysa qeybaha soo dejinta, durdurrada, dhameystirida, dib u bilaabay, istaageen, firfircoonaanta iyo firfircoonaanta firfircoonaanta. Baarkani wuxuu kaloo muujinayaa khaladaad qulqulaya, oo ay ku jiraan kuwa joojiyay soo dejinta dhibaatooyin la xiriira dhamaadka durdurrada, ama dhamaadka shabakaddaada (sida inaad si lama filaan ah uga baxday shabakad). Balooggan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu meeleeyo durdurradaada qaybo gaar ah, in kasta oo ay qasab kugu noqon doonto inaad abuurto qeybahaas naftaada: qBittorrent waxaa ku jira “Dhamaan” iyo “Aan kala-sooc lahayn”. Ugu dambeyntiina Qeybta hoose ee bar-barahan, waxaad ku arki kartaa trackers-yadaada webi kasta, oo ay ku jiraan kuwa aan lahayn baarayaal, iyo sidoo kale durdurro leh khaladaad ama digniino.
Dhanka Sare ee Show ayaa ah qalabkaaga aasaasiga ah ee webiga. Waxaad gacanta ku dari kartaa URL-yada barnaamijka isla markaana furan kartaa faylal durdurro ah faylalka aad soo dejiso. Sikastaba, sumadda qadka cas waxaa loo isticmaali karaa in lagu tirtiro qulqulatooyinka Badhanka tirtirka ah ee furahaaga ah ayaa loo adeegsan karaa isla wixii. Joogsiga iyo astaamaha ciyaarta ayaa loo adeegsan karaa in lagu joojiyo ama lagu bilaabo durdurro sidii loo baahdo iyada oo aan la tirtirin durduriga gabi ahaanba, iyo astaamaha aagga dhamaadka guddiga ayaa loo isticmaali karaa in lagu galo dejistooda, macluumaad dheeri ah ayaa ku saabsan daqiiqad kaliya. QBittorrent waxaa ku jira bar bar baaris oo kuu oggolaaneysa inaad ku dhex rogto liisaskaaga wejiyada, waxaadna u adeegsan kartaa Lock icon inaad ku xirto UI-daada sirta ah oo aad gacanta ku gashay.
Qeybta hoose ee shaashadda waxay soo bandhigeysaa xawaarahaaga guud, soo dejiso iyo gelinta macluumaadka, iyo sidoo kale isbeddel deg deg ah oo aad ku beddeleyso inta udhaxeysa xawaaraha aan xadidneyn iyo xawaaraha xadidan ee xawaarahaaga qulqulka ah (inaad ka joojiso app ka cunista xawaaraha buuxa iyo xawaaraha kale iyo hoos u dhig howlaha kale shabakadda). Ugu dambeyntiina, Shaashadda ugu weyn ee Xarunta waxay ku tusi doontaa qulqulkaaga firfircoon ee firfircoon ee shaashadda sare, halka shaashadda hoose ay muujineyso tafaasiil dheeri ah oo la soo bixi karo.
Marka laga hadlayo qaabeynta, waxaa jira waxyaabo badan oo aan jeclahay. In kasta oo inta badan lagu daro astaamaha caadiga ah, wali waan ku faraxsanahay inaan aragno iyaga oo lagu soo daray. Aynu si dhakhso leh u eegno astaamaha muhiimka ah ee tab kasta:
Habdhaqanka: halkan waxaad ku baddali kartaa luqadda istcimaalka adeegsadaha ee dalabka, haddii ay dhacdo in Ingiriisiga asalka ah uusan ahayn luqaddaada caadiga ah ama luqaddaada koowaad. Waad iskaga rogi kartaa jaangooyooyin badan oo isticmaal ah iyo doorbidyada halkan iyo dusha, oo ay kujirto awoodda aad ku gasho markii aad ka saareyso durdurrada, adeegsaneyso midabyo isku xigta, qarin eber iyo qiimayaal aan dhammaad lahayn, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxa kale oo jira qaybo aasaasi ah oo loogu talagalay desktopkaaga, oo ay kujirto awooda lagu maamulo qBittorrent bilawga, taas oo u oggolaaneysa farriin xaqiijin ah oo bixitaan ah markii webiyadu wali firfircoon yihiin oo ay beddelaan xiriirkii faylka ku dhex jiray qBittorrent ee faylasha .torrent iyo xiriiriyeyaasha Magnetic, aad ayey waxtar u leedahay haddii aad waxay raadinayaan inay isticmaalaan dhulal badan oo durdurro ah.
Downloads: Waxyaabo fara badan ayaa ka muuqda cutubkaan, laakiin halkan waxaa ah Waxyaabaha Muhiimka ah. Waxay leedahay saldhigyo aasaasi ah oo loogu talagalay falalka app-ka marka lagu daro dariiq, sida muujinta tusmada ama joojinta dib u soo dejinta tooska ah marka lagu daro waxyaabaha. Halkan waxaad sidoo kale ka beddeli kartaa sida maareynta durdurada ay u shaqeyso, oo ay kujirto awoodda lagu duubi karo faylalka durdurrada ee dariiqyada gaarka ah ee wadista adag. Iyo laga yaabee muuqaalka ugufiican ee tabkaan: Waxaad iskudubi kartaa qBittorrent si aad si otomaatik ah ugu darto dariiqyada faylalka gaarka ah iyo kuwa lala socdo.
Iskuxirka: Maahan wax badan oo qabow inta badan isticmaaleyaasha, laakiin haddii aad isku deyeyso inaad wax ka beddesho dekedahaaga dhageysiga ama aad u dejiso xaddidaadda isku xirnaanta durdurrada ama gelinta boorarka, meeshan waa meesha aad cinwaankeeda u geli doontid.
Xawaare: tab khafiif ah, laakiin muhiim ah. Halkan waxaad ka heli doontaa xaddidaadaha xawaaraha caalamiga ah ee loogu talagalay soo dejimaha badankood – taasi waa, markaad rabto inaad qBittorrent ku socoto xawaare buuxa. Hadaad rabto inaad lahaato xuduudo joogto ah oo ku saabsan soo dejintaada iyo soo dejintaada, waad iskudarin kartaa halkan; iyagu waa naafo. Xuduudeeda xawaaraha ee kale ayaa si otomaatig ah loogu hagaajiyaa 5mb / s, 1mb / s ilaa, in kastoo sidoo kale la qori karo. Xadka xawaaraha kale waa la heli karaa, sida kor lagu soo sheegay, adoo riixaya furaha qeybta hoose ee shaashadda weyn, ama adigoo barnaamij ka xawaareynaayo xawaaraha kale ee xawaaraha ku dhex jira aaladda qaabeynta.
BitTorrent: Ma jiraan wax badan oo halkan si gaar ah looga hadlayo. Qaar ka mid ah goobaha gaarka loo leeyahay iyo qaabaynta sirta ah ee looga tegay goobaha caadiga ah, jaangooyooyin safka safka ku jira (oo naafanimo ku tiirsan), iyo xaddiga saamiga bilowga durdurrada.
Qulqulka isticmaaleha shabakadda – Haddaad rabto, waxaad samayn kartaa degel adeegsade websaydh ah si aad ula socoto waxa aad kala soo baxeyso kombiyuutarka gurigaaga. Tab wuxuu muujinayaa dhamaan xaqiijinta iyo dejinta amniga shaqadan.
Horumar: Ugu dambeyntiina, inta badan xalalka raadintaada waxay ka imaaneysaa La Si kastaba ha noqotee, illaa iyo inta aad ogtahay waxaad raadineyso, waxaan kugula talineynaa inaad ka tagto tabkaan qaabkiisa caadiga ah. Dhowr waxyaabood ayaad halkan ka beddeli kartaa: Meelaha ogeysiinta, ama ha muujina ama ha muujinin ogeysiisyo kale oo webi leh, Awoodda dib loogu fiirsado durdurrada marka la dhammeeyo, iyo ikhtiyaar super-abuur ah oo adag.
Sidii la filaayay, QBittorrent waa mid ka mid ah macaamiisha ugu xasilloon ee aan helno marka ay timaado soo dejinta waxyaabaha. Ilaa iyo inta macaamiisheenna aan loo dejin xaddidaadaha xawaaraha kale, deg-degyada si dhakhso leh ayaa looga baaraandegayaa oo dhinacayadeenna ayaa lagu dhammeeyaa, iyadoo xawaaraha kala-guurguhu uu gaadhayo dhowr megabytes daqiiqaddiiba (tan ugu dhakhsaha badan sida xidhiidhkeennu u maarayn karo). Sida iska cad, xawaaraha soo degsasho kasta waxay ku xirnaan doontaa caafimaadka durdurradaada iyo tirada qorsheeyaha, laakiin waxaad hubsataa inay wax walba si togan ula socdaan qBittorrent-ka soo degsashadayada. Haddii aad go’aansato inaad joojiso beero ama soo dejiso durdur, barnaamijku wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka inaad ka saarto waxyaabaha ka baxsan drivekaaga adag, waa goob aad u fiican oo kuu fududaynaysa inaad doorato inaad rabto inaad ka dhigto masraxaaga inuu socdo. Oo waxaad si toos ah ugala soo bixi kartaa degsiga barnaamijka gudahiisa adoo gujinaya si toos ah durdurrada ku dhex jira barnaamijka.
Gabagabadii, waxaan aaminsanahay in qBittorrent uu yahay dalabka ugu wanaagsan ee adeegsadayaasha badankood. Waa ikhtiyaar adag oo la isku halleyn karo, iyada oo aan wax khayaano ah ama softiweer ah loo baahnayn oo lagu daray is-dhexgal cusub iyo is-dhexgal ka dhigaya mid fududaanaya in la soo dejiyo oo lagu kaydiyo waxa ku jira si dhakhso leh adoo adeegsanaya Codsiga. Waxaan nahay taageereyaal weyn oo qBittorrent, iyo ugu horrayn liiskaan, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso qBittorrent marka hore. Dejimaha, xawaaraha iyo fududeynta qaabeynta sameyso Codsiga in lagu garaaco Windows 10)